पुँजी बजारमा अब कहिले आउला बहार ? यसो भन्छन् बजारका हस्तीहरु
काठमाडौं : पछिल्लो केही समय यता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचक १४ सय अंकको आसपासमा घुमिरहेको छ । कारोबार रकम पनि ३०–३२ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित छ । नेप्से सूचकसँगै कारोबार रकममा समेत गिरावट आएपछि लगानीकर्ताको मनोविज्ञान केही नकारात्मक बनेको बुझिंदैछ । कारोबार रकम थोरै हुनाले बजारमा लगानीकर्ताको उपस्थिति न्यून रहेको भनेर विश्लेषण गर्नेहरु पनि देखिन थालेका छन् । अर्कोतर्फ यसले बजार अस्थिर भएका कारण नयाँ लागानीकर्ताहरु पनि प्रवेश नगरेको पनि देखाउँछ । यतिबेला प्रायजसो संस्थाहरुले साधारण सभा सकिसकेका छन् ।
धेरै कम्पनीहरुले बोनस, नगद साधारण सभाबाट पारित गराइसकेका छन् । धेरैले हकप्रद पनि ल्याइसकेको अवस्था छ । अब तत्काल कम्पनीहरुबाट लाभाश पाउने अवस्था छैन । यस्तो समयलाई अफ सिजनका रुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । यो अवस्थामा कतिपय लगानीकर्ताहरु ‘वेट एन्ड सी’ को अवस्थामा रहेकाले बजार सुस्त बनेको जानकारहरुले बताउन थालेका छन् । यही क्रममा हामीले आखिर पुँजी बजार किन भइरहेको छ त सुस्त ? अब बजारलाई गति दिन के गर्नुपर्छ भनेर नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका केही पदाधिकारीहरुसँग छोटो कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीहरुका भनाईको सार संक्षेपः
भ्याट आतंक र अधिक आपूर्तिको मारमा पर्यो बजार
उपाध्यक्ष, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम
आइपीओ, एफपीओ तथा हकप्रद सेयर अधिक मात्रामा थपिंदा बजारमा आपूर्ति चुलिएको छ । तर यस अनुसार नयाँ लगानीकर्ता थपिन सकेका छैनन् । यसको असर बजारमा परेको हो । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको पनि चुक्ता पुँजी बढेको छ । यस्तै, बिमा समितिले जीवन बिमा कम्पनीको २ अर्ब तथा निर्जीजन बिमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । एकाएक भारीमात्रामा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्दा बैंक र बिमाहरुले भारीमात्रामा हकप्रद र बोनस जारी गरे । जसका कारण बजारमा सेयर संख्या थपियो । अधिक आपूर्तिको अवस्था उत्पन्न भयो । यसको असर दोस्रो बजारमा देखिएको हो । फेरि, यही बेला अधिकमात्रामा आइपीओ आउँदा धेरै लगानीकर्ता त्यतैतर्फ लागे र दोस्रो बजारमा पैसा जान पाएन ।
सरोकारवाला निकायले समयमा नै ध्यान दिन नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । अहिले सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरु काम गर्न भन्दा भाषण गर्नमा नै बढी व्यस्त छन् । अनलाइनबाट कारोबार अझै सुरु हुन सकेको छैन । बजारलाई भाग्यको भरमा छोड्नेहरुले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई पनि लगानी गर्ने वातावरण बनाएन् । अहिले ७७ वटै जिल्लामा बैंक पुगेका छन् । बैंकका सबै शाखालाई कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे पनि अझै हुन सकेको छैन, अनि कसरी बढ्छ बजार ? व्यवसायीलाई भ्याटको आतंक फैलाइएको छ । । लगानीकर्ताको हितमा केही काम भएको छैन । जसका कारण लगानीकर्ताको मनोविज्ञान निकै कमजोर बनेको छ । बजार व्यवस्थित रुपमा चल्नका लागि अनलानइन सिस्टम सुरु हुनुपर्छ । वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्छ र एनआरएनलाई सेयर बजारमा भित्र्याउनु पर्छ ।
अब विस्तारै बढ्छ अझै तल झर्ने ठाउँ छैन
महासचिव, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम
यो बजार सुस्त नै हुने समय हो । अहिले प्रायः सबै कम्पनीहरुको साधारण सभा सकिएको छ । अब बोनस, हकप्रद धमाधम सूचीकृत हुन थाल्छन् । माथिल्लो तामाकोशीको ३ करोड भन्दा बढी कित्ता आइपीओ आँउदैछ, सान्जेन, रसुवागढीको आइपीओ पनि आउँदैछ, धेरै पैसा त्यता जान्छ । बुटवल पावर कम्पनीको एफपीओले पनि केही पैसा लग्यो । त्यस कारण बजारमा प्रयाप्त लगानी आउन नसकेको हो । बजारमा ठूला कम्पनीको आइपीओ, एफपीओ, हकप्रद, बोनस आएका कारण कारोबार रकम घटेपनि फागुनपछि विस्तारै सुधार आँउछ । यहाँ भन्दा तल झर्ने ठाउँ छैन । विस्तारै बजारले भारीमात्रामा आएका बोनस र हकप्रद सेयरलाई खपत गरिसक्नेछ । त्यसपछि बजारमा नयाँ माहोल आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बैंक ब्याजदर महँगो हुनु अनि तरलता अभावले पनि बजारलाई प्रभावित पारेको हो । लगानीकर्ताको मनोविज्ञान अर्को पक्ष हो ।
अहिलेको प्यानिक अवस्था सुधार्न विदेशी लगानीकर्तालाई खुला गर्नुपर्छ
सदस्य, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम
पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव चुलिंदै गएको छ । जसका कारण बैंकहरु निक्षेपकर्ता तान्न बचत र मुद्दति निक्षेपमा दुवैमा बढी ब्याज दिएका छन् । तरलता अभावका कारण बैंकहरु माग अनुसार ऋण दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् । कर्जामा ब्याजदर बढेका कारण लगानीकर्ताहरुले सेयर बजारमा लगानी गर्नुभन्दा बैंकमा निक्षेप जम्मा गरेर ब्याज खाने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ । लगानीकर्ता रिक्स मोलेर लगानी गर्न तयार छैनन् । बजारमा विभिन्न हल्लाहरु फैलाइएको छ । कतिपयले बजार ३ डिजिटमा पनि आउँछ भन्ने हल्ला फैलाउन थालेका छन् तर लगानीकर्ताहरु यस्ता हल्लाका पछाडि लाग्नु हुँदैन, यो सम्भव नै छैन ।
बजार अस्थिर रहेको समयमा केही ठूला लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको प्रोफाइल हेर्ने र प्यानिक अवस्था उत्पन्न गरेर सेयर उठाउने क्रम सुरु भएको छ । कारोबार रकम बढाउने हो, बजारलाई माथि उठाउने हो भने विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सेयर किन्न दिनुपर्छ । विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) लाई पनि उचित वातावरण बनाएर लगानी गर्न दिनुपर्छ । नत्र तत्काल बजार बढ्न कठिन हुने देखिएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई हाम्रो बजार खुला गरिएमा ४–५ खर्ब पैसा आउने देखिन्छ । यसबाट बजार उकालो लाग्न निकै ठूलो सहयोग पुग्नेछ । अब बन्ने सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई पुँजी बजार खुला गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्छ ।
(नेपाली पैसाका सोभित थपलियाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
नेरुडे लघुवित्त मर्जरमा जान तयार, लाभांश अनुमोदन गर्दै
अल्पकालीन कारोबारी हावी हुँदा नेप्से सामान्य दबाबमा, लगानीकर्तामा घटेको छैन उत्साह
फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम द्रुत गतिमा, भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत
बीस करोड रुपैयाँको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र खुल्दै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले भर्न पाउने
गण्डकी प्रदेशको विद्युत् चुहावट ७.९% झारिने, कुलमानले गरे कार्यसम्पादन सम्झौता
आइएमई जनरल इन्सुरेन्सको लाभांश घोषणा